Izikhangibavakashi ngu zemininingwane Ngo Budapest: 10 Izinto You Need Ukwazi | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Izikhangibavakashi ngu zemininingwane Ngo Budapest: 10 Izinto You Need Ukwazi
(Kugcine ukubuyekezwa On: 29/02/2020)
Budapest Ngokuqinisekile siyinkaba yale Hungary. Kuyinto iphuzu elisemqoka uma kuziwa Kwekuheha ngu zemininingwane e Budapest kukhona izitimela eziningi bayayeka. Nakuba Hamba nge- zemininingwane e Budapest futhi ngokuvamile kuyajabulisa futhi ngokuvamile yinto entsha abantu abaningi, kungaba futhi kancane nerve-wracking ngezinye izikhathi, ikakhulukazi idolobha elisha futhi angaphandle. Beka ukukukhulula kulokho futhi sibheke le 10 izinto odinga ukukwazi mayelana travel isitimela e Budapest.
Izincwajana zemininingwane Zokusebenzela
Kukhona zezitimela ezintathu eziyinhloko okuyinto ungakwazi Kwekuheha ngu zemininingwane e Budapest nge futhi bangabenzi:
empumalanga: Akhiwe East. Lona main omhlaba kanye ahamba sesitimela e Budapest.
entshonalanga: Akhiwe West.
Deli: Akhiwe eNingizimu
Izikhangibavakashi: Isikhumulo sezindiza Ukudluliselwa
I abaseduze sesitimela ku Budapest Airport Terminal 2 kuyinto Ferihegy, nge izitimela ezisebenza futhi kusukela esiteshini Nguyati e Budapest.
Ukuhamba nge Impahla
Uma uzihambela edolobheni nanoma yimuphi nojosaka, izikhwama noma yimuphi omunye isandla umthwalo qiniseka ukuthi uwabeka le phansi phakathi kwemilenze yakho nalapho ehamba izitimela ukuba abe phezu ohlangothini oluphephile.
Abesifazane ungakwazi bakhululeke lapho ehamba ngesitimela emhlabeni Budapest. Idolobha kuyinto ngempela ephephile idolobha elikhulu futhi nje abahambi zisebenzisa umqondo zawo ezifanayo futhi ungathathi ingozi ezingadingeki ngoba usekuvakasheni ke bangakwazi sesiqiniseka ukuthi yilutho kubo eze.
Izivakashi cishe ukuze uthole pick Kufakwe ephoketheni e ophithizelayo izindawo zokuhamba zomphakathi ezifana zezitimela, lapho ezinye ukweba izinto ezincane zingase zenzeke. Nakuba lokhu akuyona imbangela ukukhathazeka izivakashi ezinkulu belulekwa ukuba uqaphele futhi uhlale uqaphile.
Ukuthola Duzane – Izikhangibavakashi ngu zemininingwane e Budapest
Kunezindlela eziningana ezahlukene besitimela eBudapest, isitimela sokuvakasha amafomu bakha ingxenye enkulu yabamemezeli ezokuthutha yabo yasobala okusho ungathola cishe yonke indawo nje ngesitimela. Qinisekisa ukuhlola izikhathi futhi imigqa ezahlukene uzodinga ukuthatha ukuze ufike endaweni oya kuyo. Ungathola lolu lwazi ku-intanethi noma esiteshini sesitimela. Futhi unga ukuthenga amathikithi eziteshini.
Uma usunesikhathi Budapest usuku noma izinsuku ezimbili futhi sengisilethe amabombo yakho, qiniseka ukuthola Budapest Card. Ikhadi inikeza eziningi enokwengeziwe ezifana entry khulula kwamanye iminyuziyamu, khulula ibhasi/isitimela / tram / travel amanzi, namanzi cruise.
Hamba nge- zemininingwane e Budapest Day Uhambo
Kunezindlela eziningana kumnandi usuku uhambo ukuthatha ngokwenza Hamba nge- zemininingwane e Budapest. Bona kuzokusa abanye izindawo Amazing futhi akubonise ubuhle bendalo endleleni. Qiniseka ukuthi ukwenza ucwaningo yakho ngaphambi uya. Qiniseka ukuthi uthole okungcono kakhulu isikhathi sakho kuleli dolobha.
Budapest amanye omdala futhi iningi zezitimela amahle e-Hungary. Qiniseka ukuvakashela Eastern Isiteshi sesitimela (empumalanga Isiteshi sesitimela) naseWestern Isiteshi sesitimela (entshonalanga Isiteshi sesitimela) futhi kumelwe ufike kuwo by Hamba nge- zemininingwane e Budapest, kuyilapho wena ulapho ugone umlando kanye izakhiwo ekhangayo Budapest oluyohlala.
Yezindaba zemihla sesitimela Lines
I M1 umugqa e Budapest uwukudla kwesibili endala ujantshi komhlaba umugqa emhlabeni. Kuye kwaba ukusebenza kusukela 1894 futhi ngisho ohlwini UNESCO Uhlelo lemihlaba yelanga. Kukhona ngakho umlando kakhulu kuleli dolobha futhi izitimela bebelokhu ukusetshenziswa iminyaka eminingi futhi namanje lisebenza ngendlela efanele.
Budapest anawo konke futhi kuyinto izivakashi ethandwa uya khona. Kungani futhi ube njengendoda bendawo futhi balisebenzise izitimela njengoba oluthile ezokuthutha zomphakathi? Ngeke udumazeke!
Ukubhuka Isitimela Ticket e ukuhamba European? Kungani ungake uzinike 3 imizuzu kusayithi lethu ukuthola amathikithi eshibhe izindlela zokuhamba. Ngena ngemvume ukuze yethu Londoloza Iwebhusayithi zemininingwane manje. Amathikithi kungaba kukhokhelwe ngezindlela eziningi, konke ukwenza umuzwa wakho kube lula ngendlela emangazayo.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/10-things-know-travel-by-train-in-budapest/ - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#bucapest #traveleurope Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi traveltips